Baarlamanka Puntland oo tillaabo ka qaaday ”dacwad” loo haystey Xil. Cawil Daad | Hadalsame Media
Home Wararka Baarlamanka Puntland oo tillaabo ka qaaday ”dacwad” loo haystey Xil. Cawil Daad
Baarlamanka Puntland oo tillaabo ka qaaday ”dacwad” loo haystey Xil. Cawil Daad
(Garoowe) 02 Nof 2019 – Baarlamaanka Puntland ayaa laalay dacwaddii laga soo gudbiyey Xildhibaan Cawil Daad oo maalin dhowayd su’aalo sharci ah waydiiyay MW Puntland oo caro darteed deeto hoolka ka baxay.
39 xildhibaan oo ka mid ah 41 Xildhibaan oo fadhiyey kulanka 5-aad ee kalfadhiga 45-aad ayaa u codeeyey in Xildhibaanku uusan wax danbi ah ka gelin dastuur goboleedka Puntland.
Mar sii horreeysey Xafiiska Xeer Ilaalinta Puntland ayaa sheegay inuu ka laabtay dacwad sida uu yiri ay ”ku soo oogi lahaayeen” Xildhibaan Cawil Xasan Daad oo 26-kii bishii hore su’aal waydiiyey Madaxweyne Deni, kadib markii uu xildhibaanka ”raalli gelin siiyay” Madaxweynaha, sida uu xafiisku sheegay.
Waxaa intaa dheer, warar aan weli la xaqiijin karin oo shalay soo baxayay oo tibaaxayay inay jiraan xildhibaano Deni ugu tegey in aanu dacwad kusoo oogin Xildhibaanka oo sida la yiri ”u gefey dowladnimada.”
Arrintan ayay shacabka Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed oo fikirkooda ka dhiibtey ku tilmaameen ”wax lagu qoslo” oo aan meelna ka waafaqsanayn nidaamka dimoqraadiga ah, xukun wanaagga iyo daah-furnaanta.
Previous articleYAAB: Haweenay samaysatay wejiga ninkeeda si ay telefoonkiisa u furto!!
Next articleArrin degaanka halis ku ah oo ka socota magaalada Garoowe (Arag sawirrada)